Mon, May 25, 2020 at 3:33pm
काठमाडौं, पुस २२ पश्चिमी न्यूनचापीय वायुको प्रभावले आज काठमाडौँ उपत्यकासहित देशभर हल्का वर्षा र उच्च पहाडी तथा हिमाली भू–भागमा मध्यमदेखि भारी हिमपातको सम्भावना रहेको जल तथा मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ । सोमबार बेलुकाबाट प्रवेश गरेको पश्चिमी वायुको प्रभावले देशैभरि बदलीसहित वर्षा तथा उच्च पहाडी र हिमाली भू–भागमा हिमपात भइरहेको मौसमविद् मञ्जु बासीले बताउनुभयो । “पश्चिमी वायुको प्रभाव भोलिसम्म कायम रहनेछ”, मौसमविद्..
डोटी, २४ पुस मङ्गलबारदेखिको मौसममा आएको परिवर्तनले यहाँका पहाडी तथा हिमाली जिल्ला बझाङ, बाजुरा तथा अछामका उच्च लेकाली क्षेत्रमा फेरि हिमपात भएको छ । हिमपात भएसँगै चिसो बढेपछि यहाँको जनजीवन पनि प्रभावित भएको छ । डोटीकोे खप्तडस्थित झिगराना, गोलादेउ, पानीखाल, नापानी, शिखर, गोवडालेक, बडीकेदारथानलगायतका उच्च पहाडी क्षेत्रमा हिमपात भई चिसो बढेकाले गाईवस्तु चराउन समस्या भएको खप्तड क्षेत्रसँगै सिमाना जोडिएको पूर्वीचौकी गाउँपालिकाका स्थानीयवासी..
काठमाडाैं, २२ पुस । नेपालमा पश्चिमी निम्न चापीय प्रणाालीको प्रभावका कारण आज मौसम बदली भइ वर्षा तथा केहि स्थानमा हिमपातकाे सम्भावना रहेकाे छ । जल तथा मौसम पूर्वानुमान महाशाखाका अनुसार उच्च पहाडी तथा हिमाली भूभागका थोरै स्थानहरुमा हल्का देखि मध्यम हिमपात तथा पश्चिमका थोरै स्थानहरुमा र मध्य तथा पूर्वी भूभागका केही स्थानमा हल्का वर्षाको सम्भावना रहेको छ। काठमाडौं उपत्यकामा आज बिहानको न्यूनतम तापक्रम ४.२ डिग्री..
काठमाडौं, २१ पुस । पश्चिमी वायु सक्रिय हुँदा नेपालमा माैसम फेरबदली भएकाे छ। नेपालमा फेरि हिउँदे वर्षा गराउने हावा प्रवेश गरेको हाे। पश्चिम क्षेत्रबाट प्रवेश गरेको यो हावाले देशभर बर्षा र उच्चपहाडी तथा हिमाली क्षेत्रमा हिउँ पार्ने जल तथा मौसम विज्ञान विभागले जनाएकाे छ । आज दिउँसोदेखि नै पश्चिमी न्यूनचापीय प्रणालीको प्रभाव पश्चिमी क्षेत्रमा देखिने मौसम पूर्वानुमान महाशाखाका मौसमविद् मीनकुमार अर्यालले जानकारी दिएका..
काठमाडाैं, २१ पुस । सवारी चालक इन्द्र श्रेष्ठको यहाँ न घर छ, न त डेरा तर उनको बसाइ र सुताइ आरामदायी नै छ । श्रेष्ठका अनुसार उनको बसाइ भोटेबहालको लजमै हो । डेरा लिँदा महिनामा १० हजार रुपियाँ तिर्नुपर्छ तर लजमा सुत्दा प्रतिरात १५० रुपियाँ तिरे पुग्छ । खाना पनि लजमै सस्तोमा पाइन्छ । नुहाउन पानी पाइन्छ । शौचालय व्यवस्थित मिल्छ..
काठमाडौं, २० पुस केही दिनयता प्रभावित मौसम आजदेखि सुधार हुने जल तथा मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ । शनिबारसम्म बदलीसँगै वर्षा गराएको मौसमी प्रणाली कमजोर हुँदै गएकाले आजदेखि देशभर मौसम सुधार हुँदै गएको मौसमविद् प्रतिभा मान्धरले बताइन् । ‘उक्त पश्चिमी वायु कमजोर हुँदै गएकाले पानी पर्ने र हिमपात हुने क्रम रोकिँदै गएको हो । आजदेखि देशभरकै मौसममा क्रमिक सुधार आउनेछ,’ मौसमविद् मानन्धरले..
काठमाडौं, १९ पुस । मौसमविद्का अनुसार आज पनि काठमाडौं उपत्यकासहित देशैभर वर्षा र हिमपातको सम्भावना रहेको छ। केही दिनदेखि सक्रिय पश्चिमी न्यून चापीय प्रणालीका कारण आज पनि पश्चिमदेखि पूर्वसम्मै उच्च पहाडी र हिमाली भेगमा हिमपात तथा मध्य पहाडी र तराई क्षेत्रमा वर्षा हुने सम्भावना रहेको हो। 'अहिले बिहानदेखि नै ती क्षेत्रमा हिमपात तथा वर्षाको सम्भावना छ' मौसम पूर्वानुमान महाशाखाकी मौसमविद् प्रतिभा मानन्धरले..
काठमाडौं, १८ पुस जलवायु परिवर्तनको असर न्यूनीकरणका लागि उपयुक्त निर्णय निकाल्न गत डिसेम्बरको दोस्रो साता स्पेनको राजधानी म्याड्रिडमा आयोजना गरिएको संयुक्त राष्ट्रसंघ जलवायु परिवर्तन सम्मेलन (कोप २५) निष्कर्षविहीन भएपछि खासगरी साना र टापू राष्ट्रहरुलाई निराश तुल्याएको छ । चार वर्षअघि पेरिसमा सम्पन्न कोपले उठाएका विषयलाई सम्बोधन गर्न म्याड्रिड सम्मेलनले हरितगृह ग्यास उत्सर्जनमा कटौती, कार्बन व्यापार, जलवायुजन्य क्षति तथा नोक्सानीमा लगानी र जलवायु..
बाजुरा, १८ पुस । मौसममा आएको परिवर्तनसँगै सुदूरपश्चिमका अधिकांश उच्च हिमाली क्षेत्रमा हिमपात भएको छ । हिमपातले यहाँको जनजीवन कष्टकर प्रभावित बनेको छ । वर्षासँगै सुदूरपश्चिमका बाजुरासहित अछाम, डोटी, डडेल्धुरा, बझाङ, बैतडी र दार्चुला जिल्लामा बिहीबार हिमपात भएको हो । हिमपातसँगै जिल्लामा चिसो बढेको छ । बाजुराका गौमुल, हिमाली, स्वामीकार्तिक खप्तड छेडेदह गाउँपालिका र बडीमालिका नगरपालिकालगायतका क्षेत्रमा हिमपात भएको स्थानीयवासीले बताएका..
रुकुमपूर्व, १७ पुस रुकुमपूर्वको उच्च हिमाली तथा लेकाली क्षेत्रमा हिमपात भएको छ । रुकुमपूर्वमा यस वर्ष भएको यो दोस्रो हिमपात हो । जिल्लाका उच्च हिमाली तथा लेकाली क्षेत्रमा हिमपात हुँदा जिल्लाको सबै ठाउँमा पानी परेको छ । पानी र हिमपातका कारण जिल्लामा चिसो बढेको छ । चिसो बढेसँगै जनजीवन प्रभावित बनेको छ । प्रदेश नं ५ को एकमात्र हिमाली जिल्लाको रूपमा रहेको..
काठमाडौँ, १६ पुस अङ्ग्रेजी नयाँ वर्षको पहिलो दिनमा आज नेपालभर एक हजार ५६७ शिशु जन्मिने अनुमान गरिएको छ । नेपाली नयाँ शिशुहरुको हिस्सा संसारभर नयाँ वर्षको दिनमा जन्मिने अनुमानित ३,९२,०७८ शिशुको तुलनामा ०.४ प्रतिशत हुनेछ । संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय बालकोष (युनिसेफ) नेपालले यस्तो अनुमानित आँकडा प्रक्षेपण गरेको हो । नयाँ वर्ष र नयाँ दशकको शुरुआतमा आफ्नो भविष्यका लागि हाम्रा आशा र आकाङ्क्षाबारे सोच्ने मात्र..
काठमाडाैं, १६ पुस । आज देशका केही स्थानमा हिमपात र हल्का वर्षाको सम्भावना देखिएकाे छ । मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जारी गरेको सूचनाका अनुसार देशका उच्च पहाडी र हिमाली क्षेत्रमा हल्का र मध्यम खालको हिमपात हुनेछ भने पहाड र तराईका केही स्थानहरुमा हल्का वर्षाको सम्भावना रहेको छ । नेपालमा यतिबेला पश्चिमी न्यून चापीय प्रणालीको प्रभाव परेकाले देशभरी नै आंशिक तथा सामान्य बदली हुने महाशाखाले जनाएको..
काठमाडौँ, १५ पुस मंगलबार भारतको जम्मु-कश्मिरमा विकसित पश्‍चिम न्यूनचापीय प्रणाली नेपालतिर प्रवेश गर्दैछ । यो प्रणाली रातिदेखि नेपालमा सक्रिय हुने मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ । मंगलबार मौसम सामान्य रहेपनि बुधबारदेखि सामान्य बदली भइ पश्चिमी र पूर्वी पहाडि भू-भागमा हल्का वर्षाको संभावना रहेको छ । शुक्रबार र शनिबार पानी पर्ने संभावना रहेको मौसम पूर्वानुमान महाशाखाका मौसमविद‍् वरुण पौडेलले जानकारी दिए। उनले भने,'..
काठमाडौं, १५ पुस । नुवाकोटको सिसडोल भरिन लागेपछि काठमाडाैं उपत्यकाकाे फाेहाेर चुनाैतिपूर्ण बन्दै गएकाे छ । सिसडोलमा बनाइएको ल्यान्डफिल साइटमा फोहोर फाल्न थालेको १४ वर्ष पुग्दा पनि विकल्प तयार नहुँदा अब काठमाडौँको फोहोर व्यवस्थापन चुनौतीपूर्ण बनेको हाे । फोहोर फाल्ने ठाउँ भरिनुका साथै स्थानीयवासीका गुनासा र अवरोधले गर्दा यस्तो अवस्था आएको हो । दुई वर्षका लागि मात्र काठमाडौँको फोहोर फाल्न तयार गरिएको सो..
काठमाडौँ, १३ पुस खानपान देखि शयन, निन्द्रा, सपना आदीका बारेमा हिन्दू धर्म शास्त्रमा व्याख्या गरिएको हुन्छ । धर्मशास्त्रका अनुसार हामीले सुत्नु भन्दा अगाडी जहिल्यै विचार पुर्‍याउनुपर्छ । गलत समयमा सुत्दा हाम्रो स्वास्थ्यलाई बेफाईदा पुर्‍याउनुको साथै हानिकारक मानिन्छ । यी हुन् सुत्नै नहुने तीन समय : घाम झुल्किएपछि शास्त्र अनुसार, घाम झुल्किएपछि पनि सुतिरहनेसँग धनकी देवी लक्ष्मी रिसाउँछिन् । त्यसरी सुत्ने ब्यक्तिहरु जति पैसा..
काठमाडौं, १३ पुस । काठमाडौं उपत्यकासहित देशभर चिसो बढ्ने क्रम जारी छ । आज काठमाडौंको न्यूनतम तापक्रम १ डिग्री सेल्सियस मापन गरिएको छ । हिजो शनिबार काठमाडौंको न्यूनतम तापक्रम ०.६ डिग्री सेल्सियस मापन गरिएको थियो । मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले चिसो अझै बढ्न सक्ने अनुमान गर्दै चिसोबाट बच्न उचित सतर्कता अपनाउन आग्रह गरेको छ । आज बिहानैदेखि चिसो हावा चलिरहेका कारण तुलनात्मक रुपमा बिहान बढी..
काठमाडौँ, १२ पुस दुधमा प्रसस्त मात्रामा प्रोटिन पाइन्छ । सादा दुधलेनै शरीरलाई कतिपय रोगबाट टाढा राख्छ, भने यसमा यी खानेकुरा मिलाएर खाइयो भने झन राम्रो हुन्छ । खजुर कमजोरी महसुस भइरहेको छ भने दुधमा खजुर हालेर खानुपर्छ । खजुरमा हुने खनिज पदार्थ, भिटामिन्सले शरीरलाई तागत दिन्छन् । दुध उमाल्दा त्यसमा खजुर हाल्ने र दुधसँग खाने । बदाम कब्जियतको समस्या भएकाले राति सुत्नुअघि एक गिलास मनतातो..
काठमाडौं, १२ पुस । काठमाडौं उपत्यकाको तापक्रम घट्ने क्रम जारी छ। शनिबार बिहानको उपत्यकाको न्यूनतम तापक्रम शून्य दशमलव ६ डिग्री सेन्टिग्रेड मापन गरिएको मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ। महाशाखाका अनुसार आज मापन गरिएको तापक्रम यो वर्षकै सबैभन्दा न्यून हो।उपत्यकाको तापक्रम अझै घट्नसक्ने र केही दिनमै माइनसमा जानसक्ने महाशाखाले जनाएको छ। बाक्लो हुस्सुका कारण तराईमा पनि जाडो बढ्दै गएकाले शीतलहरको प्रभाव देखिनसकिने महाशाखाको भनाइ छ।..
काठमाडौँ, १२ पुस प्राय दाह्री भएको पुरुष प्रति आकर्षित किनः पुरुषलाई दाह्री पुरै सफा तरिकाले काटेर बस्न मन पर्छ र उनलाई लाग्छ की केटिहरु पनि क्लिन सेव भएका केटाप्रति आकर्षित हुन्छिन् । तर, अबको समयमा केहि परिवर्तन आउन थालेको छ । हालै लाइफस्टाइललाई लिएर गरिएको एक अध्ययनमा केटि र महिलालाई अब क्लिन सेव गर्ने केटा भन्दा दाह्री भएको पुरुष प्रति बढी..
काठमाडौँ, १० पुस काठमाडौँ उपत्यकाको तापक्रम घटेसँगै आज बढी चिसो महसुस गरिएको छ । उपत्यकाको न्यूनतम तापक्रम शून्य दशमलव ९ डिग्री सेल्सियसमा झरेको छ । यो काठमाडौँ उपत्यकाको यस वर्ष मापन गरिएको सबैभन्दा कम तापक्रम हो । बुधबार उपत्यकाको तापक्रम २ दशमलव ९ डिग्री सेल्सियस थियो । मौसमविद् गङ्गा नगरकोटीका अनुसार तापक्रम निरन्तर घट्ने क्रममा रहेको छ । “पश्चिमी वायुको प्रभाव पुन..
काठमाडौँ, १० पुस आधुनिक युगमा व्यस्तताको कारण मानिसहरु प्राय केही प्रकारको व्यायाम गर्न चाहँदैनन्। जसकारण मानिसको शरीर आलस्य हुदै गएको देखिन्छ । यसले भिन्न प्रकारको रोगहरु निम्त्याउँछ । दौड शरीरको लागि निकै फाइदा जनक छ । यसले शरीरको मस्तिष्क र अन्य भागलाई फाइदा पुर्याउने गर्छ । दौडले मस्तिष्कको स्वस्थालाई सुधार गर्ने मद्दत पुर्याउछ । दौडले मान्छेको मोटोपनलाई घटाएर फुर्तिलो बनाउन मद्दत गर्छ..
काठमाडौँ, ९ पुस काठमाडौँ उपत्यकाको तापक्रम घटेसँगै आज बढी चिसो महसुस गरिएको छ । उपत्यकाको न्यूनतम तापक्रम आज २ दशमलव ९ डिग्री सेल्सियस रहेको छ । यो काठमाडौँ उपत्यकाको यस वर्ष मापन गरिएको सबैभन्दा कम तापक्रम हो । यसअघि मङ्गलबार उपत्यकाको न्यूनतम तापक्रम ३ दशमलव २ डिग्री मापन भएको थियो । मौसमविद् विभूति पोखरेलका अनुसार तापक्रम निरन्तर घट्ने क्रममा रहेको छ ।..
काठमाडौं, पुस ९ । चिसो मौसममा छालामा विभिन्न समस्या देखिने गर्छ । जाडो मौसममा हाम्रो छालामा पनि रुखो फुट्ने र सुख्खा हुने समस्या देखिन्छ, कतिपयमा भने छालाको पत्र उप्किने, चिलाउने, सुन्निने, दागहरु आउने समस्यासमेत देखिने गरेको देखिन्छ । जाडोमा छाला मुलायम र चम्किलो बनाउन यस्ता छन् आठ तरिका १. अनुहार हातले हल्का मसाज गर्ने जसले गर्दा अनुहारमा रक्तसञ्चार भएर छालाको सौन्दर्य कायम राख्छ..
दमौली, ७ पुस तनहुँको दमौलीमा स्थापना गरिएको कपडा बैंकमा कपडाको अभाव भएको छ । विपन्न समुदायका लागि निःशुल्क कपडा वितरण गर्न स्थापना गरिएको बैंकमा कपडाको अभाव भएको लायन्स क्लब अफ तनहुँ दमौलीले जनाएको छ । क्लबका सदस्यबाट सङ्कलन गरिएको रु चार लाखको लगानीमा गत असोज महिनामा कपडा बैंक स्थापना भएको थियो । हाल कपडा बैंकमा कपडा अभाव भएकाले विपन्न समुदायलाई कपडा वितरण..
बाँके, ६ पुस बाँकेमा शीतलहर शुरु भएपछि जनजीवन कष्टकर भएको छ । चिसो हावासँगै पानीको मसिनो थोपा र बाक्लो हुस्सु लागेका कारण अत्यधिक चिसो बढेपछि सर्वसाधारण घरबाहिर निस्कनसमेत सकेका छैनन् । शीतलहर र हुस्सुका कारण विपन्नलाई सास्ती भएको छ । अघिल्लो साता परेको वर्षापछि अत्यधिक जाडो बढेको छ । चिसाले बाँकेका अल्पसङ्ख्यक तथा विपन्न समुदाय सबैभन्दा बढी प्रभावित भएका छन् । चिडिमार,..
काठमाडौँ, ६ पुस बिहान चाँडै उठ्नुका विभिन्न फाइदा छन्, यसमा दुई मत छैन । सबेरै उठेर व्यायाम गरेर, नाश्ता गरेर, अफिसका लागि तयार भएर आफ्ना केही कामसमेत गर्न भ्याइन्छ । शारीरिक र मानसिक रूपमा स्वस्थ रहन बिहान चाँडै उठ्नुपर्छ। बिहानै उठ्दा डिप्रेसनको जोखिम कम हुन्छ। –सबेरै उठ्ने मानिसले विभिन्न मानसिक समस्याबाट छुटकारा पाउँछ। यस्ता व्यक्तिलाई डिप्रेसनको जोखिम कम हुन्छ। –बिहानै उठ्ने व्यक्तिले सफा र..
दीर्घायुका लागि अपनाउनु पर्ने टिप्स
एजेन्सी, ६ पुस धेरैलाई लाग्छ दीर्घायु वंशाणुगत हुन्छ। तर यस्तो हुँदैन। मानिस कसरी बाँचिरहेको छ भन्ने कुराले उसको आयुको निर्धारण गर्छ । शरीरमा रोग लाग्ने वा नलाग्ने भन्ने विषयसमेत ७० प्रतिशत कारण मानिसको जीवनशैलीमा निर्भर हुन्छ । आहार र जीवनशैली लगायतको मुख्य भूमिका हुन्छ भन्ने अहिले प्रमाणित हुँदै आएको छ । दीर्घायुका लागि १३ स्वस्थ बानीहरूमा सुधार गरे जीवन उपयोगी र दीर्घायु..
बिर्सने बानीले सताएकाे छ भने अपनाउनुहाेस् यी उपाय !
एजेन्सी, पुस १ पढेका कुरा एकछिनमा बिर्सने समस्याको कारण धेरै मेहनत गर्ने विद्यार्थी पनि असफल भएका उदाहरण सुन्न पाइन्छ । तलका उपाय अपनाउनुभयो भने तपाईंले पढेको कुरा स्मरण गराउन सहज हुन सक्छ । - लामो समयसम्म एउटै पाठ नपढ्नुहोस् । पढेर वा रटेर भन्दा पनि त्यो कुरालाई कोटिङ गरेर पढ्नुहोस् । यसो गर्दा सम्झन सजिलो हुनका साथै फरक तरिकाले सोच्ने बानीको विकास..
चिसोले जनजीवन प्रभावित, टेलिकमका सबै सेवा अवरुद्ध
बाजुरा, २९ मङ्सिर । सदरमुकाम मार्तडीसहित हिमाली क्षेत्रमा परेको हिमपातका कारण चिसो बढेसँगै दैनिक जनजीवन प्रभावित बनेको छ । चिसोका कारण स्थानीय बजार बन्द छन् भने ग्रामीण क्षेत्रमा आवतजावत रोकिएको छ । हिमपातले एक गाउँदेखि अर्को गाउँसम्मको सम्पर्क टुटेको छ भने हिमाली क्षेत्रमा रहेका विद्यालय बन्द गरिएका छन् । शनिबार घाम लागे पनि घर बाहिर आएर हिँडडुल गर्न समस्या देखिएको हो ।..
डण्डीफोरको अचुक औषधि मेथी, यस्ता छन् यसका फाइदा
काठमाडौ, २९ मङ्सिर । हाम्रै वरिपरि पाइने विभिन्न सागसब्जी तथा फलफूलहरू हाम्रो स्वास्थ्यको लागि एकदमै फाइदाजनक हुने गर्दछन्, तर हामीले यो कुराको त्यति ख्याल गर्दैनौँ, मन लागे अनुसारको तरकारी खाने गर्छौँ। हुन त, यो कुनै नराम्रो कुरा होइन। तर हाम्रो स्वास्थ्य स्थितिलाई विचार पुर्याएर त्यसैअनुरूपको खानेकुराहरू खानु आवश्यक हुन आउँछ। मेथी स्वादमा तितो भएपनि मानव स्वास्थ्यमा भने निकै फाइदाजनक छ । मेथिका फाइदा कपाल..
Results 740: You are at page3of 25